Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » USA » Rwisa kuneta nekutora nguva kuronga zororo rako
Zviuru zvemasangano ekufambisa akatenderedza United States zviri kuratidza chirongwa chegore negore cheNational Plan for Vacation Day (NPVD) musi wa25 Ndira kukurudzira vanhu vekuAmerica kuronga nguva yavo yese yekuzorora kwegore pakutanga kwegore.
Mushure meanoda kusvika makore maviri ekushushikana-ane hukama nedenda, vashandi vekuAmerica vanopiswa-uye data nyowani inozviratidza.
Kubatsira kurwisa kupera simba uye kukurudzira vanhu vekuAmerica kutora zororo rinodiwa, zviuru zvemasangano ekufambisa akatenderedza. nyika dzakabatana vari kusimbisa gore negore Chirongwa cheNyika cheZuva Rezororo (NPVD) pana Ndira 25 kukurudzira vanhu vekuAmerica kuronga nguva yavo yese yekuzorora kwegore pakutanga kwegore.
Vanopfuura zvikamu zviviri muzvitatu (68%) yevashandi vekuAmerica vanonzwa kupiswa zvine mwero uye 13% vakapiswa zvakanyanya. Kupfuurirazve, inopfuura hafu (53%) yevashandi vari kure vari kushanda maawa akawanda ikozvino kupfuura zvavaive vari muhofisi uye 61% vanowana zvakanyanya kuoma kubvisa kubva kubasa uye kutora zororo.
Zvisinei nedenda razvino redenda, data kubva kuDestination Analysts rakaona kuti ruzhinji rwevanhu vekuAmerica vakavhoterwa vari “vakagadzirira kufamba” pfungwa uye vane shungu dzekuronga rwendo:
81% yevaAmerica vari kufara kuronga zororo mumwedzi mitanhatu inotevera
Vanosvika vatanhatu mugumi (10%) vanobvuma kuti kufamba kwakakosha kupfuura nakare kose uye 59% inoronga kuita kuti kufamba kuve kwekutanga bhajeti muna 61.
Nhoroondo, NPVD chakaitirwa kubatsira kugadzirisa dambudziko revanhu vekuAmerica vanotadza kushandisa nguva yavo yese yekuzorora gore rega rega, zvisinei, matambudziko edenda akapa. NPVD kukosha kutsva: nguva yekuronga mberi kwemazuva akajeka uye kubvisa kubva kune zvinonetsa zvehupenyu hwezuva nezuva.
Mushure meanoda kusvika makore maviri ekurarama nedenda, vanhu vekuAmerica vari kuda kugadziridzwa zvakare iyo zororo rinopihwa, zvisinei nekuti padyo kana kure kwazvinokusvitsa. Chirongwa chenyika cheZuva reZororo ndiwo mukana wakakwana wekugara pasi nemhuri uye neshamwari uye kuronga hurongwa hwenguva inodiwa kwazvo yekuzorora kwegore rose.
Kunyangwe chiito chakareruka chekuronga zororo chinogona kubatsira kudzinga chando cheblues. Vanosvika zvikamu zvitatu muzvina (74%) yevarongi vakaratidza kufara kwakanyanya kana kufara kwazvo kutarisira uye kuronga mazororo egore rinouya vachipesana neina chete mugumi vevasina kuronga.
Zvisinei, zvipingamupinyi zvine chokuita nebasa-zvakadai sekuremerwa kwebasa uye kushomeka kwevashandi-ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvepamusoro zvinotadzisa vanhu vekuAmerica kushandisa nguva yavo yekuzorora.
Zvemagariro media zveNyika Plan yeZuva Rekuvhakacha zvichamakwa pachishandiswa #PlanForVacation.
Hafu yeAirbus Fleet haina kuchengetedzeka maererano neQatar Airways
Beverage Emulsion Market Outlook, Yazvino uye Ramangwana...
Tattoo Removal Lasers Market yakasangana neCAGR ye...